Sidee Bilyan-dheer lagu noqdaa? - BBC News Somali
Image caption Kylie Jenner waxa ay leedahay shirkad qalabka is qurxinta dumarka
Gabadh naqshadeysa xijaabka oo xukun dheer lagu riday
Image caption Jeff Bezos, ayaa kaalinta koowaad ka galay dadka bilyan-dheerka ah ee sanadka 2018-ka.
Waxaa ka mid ah 7 qof oo ka tirsan qoyska Walton, kuwaas oo dhaxlay shirkadda Walmart, iyo xubnaha qoyska Francoise Bettencourt-Meyers kuwaas oo dhaxlay shirkadda agabka dumarka ee L'Oreal.
Waxaa jira sababo dadkan ka dhigaya hormuudka hantiilayaasha, waxaase ugu muhiimsan sababta ah in aysan bixinin canshuur badan, waaba haddii la canshuuree. Daraasad la sameeyayna waxaa lagu sheegay in boqolkiiba 25% ama 30% canshuuradaha lala dhuunto adduunka ay mas'uul ka yihiin dadka tirada yar ee hantiilayaasha ah.
Image caption Abigail Johnson, waxa ay madax ka tahay shirkadda maareynta maaliyadda ee Fidelity Investments, waxa ay ka tahay 250 dumarka ah ee soo galay diiwaanka Forbes.
Image caption Jack Ma waa ninka Shiinaha ugu taajirsan